लेनोभोको निर्माण पछी मात्र चिनियाँहरुमा कम्प्युटर चलाउने बानीको विकास भयो !  HamroKatha
कम्प्युटर मेकर : लेनोभोका चुआन्जीको एकमात्र रहर थियो, कम्प्युटर निर्माणमा महान् बन्ने
हाम्रो कथा २०७६ साउन ३० गते १५:०१
चीन यदि आज यस्तो विकासको मार्गमा छ भने त्यो त्यहाँका व्यवसायीहरुका कारण हो । आजको कथा चीनको पहिलो ग्लोवल उद्योग, लेनोभो र यसका मालिक लिउ चुआन्जीको हुन् ।
चुआन्जीको जन्म सन् १९४४ अप्रिल २९ मा भएको थियो । उनी रहरले सेनामा पाइलट भएर काम गर्न चाहन्थे, तर बुवा एक दक्षिणपन्थी सोचका मानिस भएका कारण उनलाई तत्कालिन सरकारले सैनिक पाइलट हुनबाट बञ्चित गरायो । त्यसपछि उनी टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पढ्न थाले I
तस्वीर : Cloud Employee बाट
उनले तत्कालिन साँस्कृतिक क्रान्तीलाई विरोध जनाएकै कारण सन् १९६६ मा उनलाई सरकारले हुनान प्रान्तमा खेतिपाती गर्न पठायो । पछि सन् १९७० मा उनी बेइजिङ फर्केर एउटा कम्प्युटर इन्सटिट्युटमा इन्जिनियर भएर कम्प्युटर निर्माणमा काम गर्न थाले । यसरी काम गर्दागर्दै उनी सन् १९८४ मा जागीर छोड्न पुगे र थाले उत्पादन लेनोभोको । कारण चीन त्यसबखत् मार्केट इकोनोमीमा बल्ल आफुलाई अगाडि बढाउँदै थियो ।
लनोभोको अर्थ हुन्छ महान् । हाल लेनोभो संसारकै सबैभन्दा ठूलो कम्प्युटर मेकर हो । चुआन्जीको एकमात्र रहर थियो, कम्प्युटर निर्माणमा महान् बन्ने । तर यो महान् बन्ने प्रकृया भने, निकै गाह्रो सुरुवात सहित सुरु भएको थियो । यसको सुरुवातमा १० जना इन्जिनियर र २ लाख यान सहित सुरु गरिएको थियो । जुन समयमा चीनमा सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र थियो, त्यो समयमा यसरी कम्पनि सुरु गर्नु वास्तवमै एउटा महान् काम थियो । त्यसैले लिउलाई च्याम्पियन अफ चाइनिज क्यापिटलिज्म् पनि भनिन्छ ।
उनी आफुमा म्यानेजमेन्ट र डिसिजन मेकिङ प्रकृयामा सामेल हुन चाहने पहिल्यै देखि रुची रहेको र त्यहि रुचीले उनलाई उद्यमी बनाएको बताउँछन् । त्यहि क्षमताले उनलाई एचपि र आइविएम जस्ता कम्पनिको सहयात्री बन्न मद्दत पुर्यायो । र उनको त्यहि क्षमताले नै पछि चाइनीजहरुमा कम्प्युटर चलाउने बानीको विकास गरायो । उनी त्यसै कारण एचपिलाई आफ्नो गुरु मान्छन् ।
चीनमा एउटा प्रख्यात भनाइ छ, ‘धन कमाउन रिस्क लिनुपर्छ ।’ यहि भनाइले आफुलाई प्रेरणा दिने गरेको बताउँछन् । र यहि प्रेरणाका कारण उनको कम्पनिले अमेरिकामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । लेनोभोको मार्केट भ्याल्यु लगभग २.५ विलियन अमेरिकि डलर बराबरको रहेको छ ।
जीन्दगीको सत्तरीको दशकमा यात्रा गरेपनि उनमा जोस जाँगर भने भरिएर रहेको छ । सबेरै उठेर उनी एक्सरसाइज गरेर ठिक समयमा अफिस पुग्छन् । उनी टिम विल्डिङ र विश्वासमा धेरै विश्वास गर्छन् । चीनका स्टिभ जव्स मानिने र पेशाले कम्प्युटर इन्जिनियर चुआन्जीको हाल कुल सम्पत्ति ९ विलियन अमेरिकि डलर बराबरको रहेको छ ।
अफिसियल रुपमा ‘खुशी’ !
३१ साउन , २०७६ ४ मिनेटमा पढिने